Ny fanandramana nataon'i Miller: ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao | Green Renewable
Tamin’ny 15 Mey 1953, ny mpahay simia 23 taona dia namoaka tao amin’ny gazety Science ny vokatry ny andrana iray tena ilaina amin’ny biolojia izay nanokatra ny lalana ho amin’ny sehatry ny fahalalana siantifika vaovao. Ity tovolahy ity dia Stanley L. Miller. Ny asany dia nitarika ny fitsipi-pifehezana momba ny simia prebiotic araka ny fantatsika ankehitriny ary nanome antsika ny famantarana voalohany momba ny fomba nisehoan'ny fiainana teto an-tany. ny Andrana Miller Fantatra tsara eo amin’ny tontolon’ny siansa izany.
Noho izany, hanokana ity lahatsoratra ity izahay hilaza aminao ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao momba ny andrana nataon'i Miller sy ny ao anatiny.
1 Tany voalohany
2 Famantarana avy amin'ny andrana nataon'i Miller
3 Ny fanandraman'i Miller amin'ny lalina
4 Molekiola organika avy amin'ny habakabaka
Stanley Miller dia vao avy nahazo diplaoma tamin'ny simia ary nifindra tany amin'ny Oniversiten'i Chicago miaraka amin'ny hevitra momba ny tesis dokotera. Tao anatin'ny volana vitsivitsy taorian'ny asany, Harol C. Urey nahazo ny loka Nobel dia tonga tany amin'ny oniversite ary i Miller dia nanatrika ny seminera momba ny niandohan'ny tany sy ny atmosfera tany am-boalohany. Ny lahateny dia nahasarika an'i Miller be dia be ka nanapa-kevitra ny hanova ny foto-kevitry ny thesis izy ary nanolotra an'i Yuri fanandramana izay tsy mbola nanandrana azy taloha.
Amin'izay fotoana izay, Namoaka boky mitondra ny lohateny hoe “The Origin of Life” ilay Rosiana biochemista Alexander I Opalin.. Tao anatin'izany no nanazavany ny fomba itondran'ny fizotry ny simika ho azy amin'ny fipoiran'ireo zavamananaina voalohany, izay nivoatra tsikelikely tao anatin'ny vanim-potoana an-tapitrisany taona.
Tokony ho 4 lavitrisa taona lasa izay, ny molekiola tsy ara-organika ao amin'ny tany am-boalohany dia hihetsika hamokatra molekiola organika voalohany, avy eto ny molekiola sarotra kokoa, ary farany ny zavamananaina voalohany.
Oparin dia nieritreritra tany am-boalohany izay tsy mitovy tanteraka amin'ny tany ankehitriny, talohan'ny nanovan'ny zavaboary azy.
Famantarana avy amin'ny andrana nataon'i Miller
Ny iray amin'ireo famantarana ny amin'ny tany am-boalohany dia mifototra amin'ny fahalalana astronomika efa misy. Raha heverina fa avy amin'ny rahona misy entona sy vovoka ny tany sy ny planeta hafa ao amin'ny rafi-masoandro, dia mety hitovy be amin'ny planeta toa an'i Jupiter sy Saturn ny firafitry ny atmosfera eto an-tany: noho izany, azo inoana fa manankarena metanina sy hydrogène ary amoniaka izy io. Izany dia ho atmosfera mihena miaraka amin'ny fifantohana oksizenina ambany dia ambany satria io no fandraisan'anjaran'ny bakteria photosynthetic voalohany.
Ho safotry ny rano ny velaran-tany. Manankarena molekiola simika ny ranomasina. Noheverin'i Oparin ho toy ny lasopy tranainy be molekiola simika ny ranomasina fahiny.
Ity tontolo tany am-boalohany ity dia hikorontana kokoa noho ny amin'izao tontolo izao, miaraka amin'ny asan'ny volkano matetika, ny tafio-drivotra elektrika matetika, ary ny taratra masoandro mahery (tsy misy sosona ozone hisorohana ny taratra ultraviolet). Ireo dingana ireo Izy ireo dia hanome angovo ho an'ny fanehoan-kevitra simika izay mitranga any an-dranomasina ary amin'ny farany dia hitarika amin'ny fiposahan'ny fiainana.
Mpahay siansa maro, anisan'izany i Yuri, no nizara ireo hevitra ireo. Tombantombana fotsiny anefa izany, tsy nisy nanandrana izany, mainka fa rehefa nosedraina. Mandra-pahatongan'i Miller.
Ny fanandraman'i Miller amin'ny lalina
Miller dia nieritreritra fanandramana iray izay hitsapana ny petra-kevitr'i Yuri sy Opalin ary handresy lahatra an'i Yuri hanatanteraka izany. Ny andrana naroso dia ny fampifangaroana gazy heverina fa misy ao amin'ny atmosfera tany am-boalohany - metana, amoniaka, hidrozenina, ary etona rano - ary hizaha toetra raha afaka mifanatrika izy ireo mba hamokarana zavatra organika. Tsy maintsy miantoka ianao fa ny dingana dia atao amin'ny toe-javatra anaerobic (izany hoe tsy misy oksizenina) ary tsy misy singa velona afaka mampiroborobo ny fanehoan-kevitra.
Noho izany antony izany, dia nanamboatra fitaovana fitaratra mihidy misy tavoara sy fantsona izy, tsy afaka miditra ny oksizenina, ary nodioviny ny fitaovana rehetra mba hanafoanana ny zavamananaina rehetra. Nandraraka rano kely mampiseho ny ranomasimbe voalohany tao anaty siny izy. Nofenoiny metana sy hidrozenina ary amoniaka ho toy ny atmosfera tany am-boalohany ny tavoara iray hafa.
Eto ambany, ny capacitor dia mamela ny akora miforona ao amin'ny atmosfera mba hampangatsiaka sy liquefy amin'ny alalan'ny fivoahana ateraky ny electrodes roa, izay hanahaka ny vokatry ny tselatra.
Nanao fanandramana i Miller indray alina. Rehefa niverina tany amin'ny laboratoara aho ny ampitso maraina, dia nivadika mavo ny rano tao anaty tavoara. Taorian'ny herinandro fandidiana, nanadihady ny rano volontsôkôlà ary nahita fa maro ny fitambarana novokarina tsy nisy teo aloha, anisan'izany ny asidra amino efatra (karazana ampiasain'ny zavamananaina rehetra ho fitaovana fananganana sela) (proteinina).
Asehon'ny fanandraman'i Miller fa raha mety ny toe-piainana ara-tontolo iainana, dia afaka miforona ho azy avy amin'ny molekiola tsy organika tsotra ny molekiola organika.
Molekiola organika avy amin'ny habakabaka
Na dia izany aza, taona vitsivitsy tatỳ aoriana, ny mpahay siansa dia nanatsoaka hevitra fa ny haavon'ny fampihenana ny rivo-piainana tany am-boalohany dia ambany noho ny noeritreretin'i Yuri sy Miller, ary mety ahitana gazy karbonika sy azota. Ny fanandramana vaovao dia mampiseho fa, ao anatin'ireo fepetra ireo, Ny synthesis ny zavatra organika dia tsinontsinona. Sarotra ny mieritreritra hoe afaka manome aina ny lasopy tsara toy izany. Saingy avy eo dia niseho ny vahaolana amin'ity olana ity, tsy avy amin'ny fanandramana vaovao eto an-tany, fa ... avy amin'ny habakabaka.
Tamin’ny 1969, nisy meteorita niforona 4.600 lavitrisa taona lasa izay, nianjera teo akaikin’i Murchison, any Aostralia. Taorian'ny famakafakana dia hita fa misy molekiola organika isan-karazany, anisan'izany ny asidra amine sy ny zavatra hafa noforonin'i Miller tao amin'ny laboratoara.
Amin'izany fomba izany, raha tsy mety amin'ny fananganana molekiola organika ny toetry ny tany am-boalohany, Mety ho nampiasa zavatra simika ampy handrafetana ny lasopy prebiotika eto an-tany ny zavatra vahiny ary aoka isika hahita ny fiainana sambany.
Amin'izao fotoana izao, ny manam-pahaizana dia toa mirona indray amin'ny atmosfera fampihenana tany am-boalohany ary mirona kokoa amin'ny valin'ny Miller. Noho izany, dia azo ekena fa raha mihena ny atmosfera eto an-tany, dia azo inoana fa mampifanaraka ny zavatra ilaina amin'ny fiainana eto an-tany izy io, ary raha harafesina ny atmosfera, dia mety ho avy amin'ny meteorita sy ny nucleus kometa.
Na izany aza, na nanomboka teto amin'ny planetantsika izy io na tany ivelan'ny planetantsika, dia nisy fitsapana maro samihafa nampiseho fa ny zavatra organika dia mety ho vokatry ny fanehoan-kevitra simika tsotra.
Manantena aho fa amin'ity fampahalalana ity dia afaka mianatra bebe kokoa momba ny fanandramana nataon'i Miller ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Angovo azo havaozina » Andrana Miller